Ngomhla wama-30 kuMeyi weZodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
I-Horoscope Yemihla Ngemihla
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Ngomhla wama-30 kuMeyi weZodiac yiGemini-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Ngomhla wama-30 kuMeyi weZodiac yiGemini-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Uphawu lwe-zodiac ngoMeyi 30 yiGemini.
Uphawu lweenkwenkwezi: Amawele . Olu phawu lumele abo bazalwa ngoMeyi 21 -Juni 20, xa iLanga lihambisa uphawu lweGemini zodiac. Ibonisa ubumbano, izakhono zonxibelelwano kunye nokwabelana.
Inkqubo ye- IGemini Constellation Ngenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini ze-zodiac kwaye ilele phakathi kweTaurus ukuya eNtshona kunye neCancer ukuya eMpuma. Inkwenkwezi eqaqambileyo ibizwa ngokuba yiPollux. Eli qela lincinci ukusasazeka kummandla wee-degrees ezingama-514 kuphela kunye nokugubungela ukubonakala okubonakalayo phakathi kwe-90 ° kunye -60 °.
AbaseSpain bayibiza ngokuba yiGeminis ngelixa amaFrentshi asebenzisa igama elithi Gémeaux ngophawu lwe-zodiac ngoMeyi 30 kodwa eyona mvelaphi yamawele ikwiLatin Gemini.
Uphawu olwahlukileyo: Sagittarius. Oku kuphakamisa ukuba lo mqondiso kunye neGemini ziyahambelana kwaye zibekwe ngaphaya kwevili lokuvumisa ngeenkwenkwezi, intsingiselo yokuthetha kunye nengqondo ebanzi kunye nolunye uhlobo lwesenzo sokulinganisa phakathi kwezi zimbini.
Ukuziphatha: Imfono. Lo mgangatho uphakamisa imeko yemfesane yabo bazalwa nge-30 kaMeyi kunye nokuqonda kwabo ngokuthe ngqo kunye noncedo ekuthatheni ubomi njengoko bunjalo.
Indlu elawulayo: Indlu yesithathu . Olu lubeko lubonisa ukuhlangana ngokwasentlalweni, unxibelelwano kunye nokuhamba kwaye kutyhila ukuba kutheni le nto bahlala bedlala indima ebalulekileyo kubomi baseGeminis.
Umzimba olawulayo: Imercury . Olu nxibelelwano lubonakala lucebisa unxibelelwano kunye nolonwabo. Imercury ikwabonwa njengothixo wesithunywa. Oku kukwabonisa ukugxila kokuphazamiseka.
Isiqalelo: Umoya . Eli ziko lifanekisela ukuhamba kunye nokutsha kwaye kuthathelwa ingqalelo njengokulawula ngaphezulu kwabantu abakrelekrele nabavulekileyo abaxhumeke kuMeyi 30 zodiac. Umoya ufumana neentsingiselo ezintsha ngokunxulumana nomlilo, usenza ukuba izinto zishushu, amanzi abe ngumphunga ngelixa umhlaba ubonakala ngathi uyawufuthanisela.
Usuku lwethamsanqa: uLwesithathu . Olu lusuku olulawulwa yiMercury, ke ngoko lufanekisela ulwamkelo kunye nokuthandeka kwaye luchaza kakuhle abemi baseGemini abangakhathaliyo.
Amanani anethamsanqa: 6, 9, 11, 19, 26.
Ulwazi oluthe kratya ngoMeyi 30 Zodiac ngezantsi ▼
Iinyani zeTaurus Constellation
Amanqaku Okusayina 2022
U-Leo Man kunye neLibra yabasetyhini ukuhambelana kwexesha elide
ILibra Tiger: I-Negotiator ethandekayo ye-Chinese Western Zodiac
I-2019 Chinese Zodiac: Unyaka wehagu yomhlaba-Iimpawu zoBuntu
yintoni uFebruwari 25 uphawu lwe-zodiac
ungayiphumelela njani intliziyo yentliziyo ye-aquarius
wenza njani i-aries xa enomona
1987 into element umvundla
Ukwabelana ngesondo nomntu we-libra